Madaxweynaha xasan sheikh iyo wasiiro ka tirsan Soomaaliya oo maanta booqday degmada Marka – Radio Daljir
Madaxweynaha xasan sheikh iyo wasiiro ka tirsan Soomaaliya oo maanta booqday degmada Marka
Seteembar 3, 2013 3:18 b 0
Marka, September 3, 2013 – Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud ayaa booqasho aan horey loo shaacin ku tegey degmada Marka ee xaruunta shabeelaha hoose, Madaxweynaha ayaa ku baxay safarka dhulka ah.
Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya ?Cabdiraxmaan yariisow, ayaa shaaciyey in safarka madaxweynaha ee Marka uu yahay mid loogu kuur gelayo xaalada guud ee gobolka iyo collaadaha beelaha iyo amni darrada jirta, Eng. Yariisow wuxuu sheegay in safarkan uu qaadan doono labba maalmood.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulamo la qaadan doona qeybaha kala duwan ee bulshada, maamulka KMG ah ee gobolka iyo kan degmada, sidoo kale madaxweynuhu la kulmayaa waxgaradka, isla wakhtigaas madaxweynaha ayaa il gaara ah ku eegi doona xaalada gobolka iyo sidii loo sugi lahaa amniga guud.
Wasiirka caddaalada, wasiirka amniga iyo arrimaha guddaha, wasiirka gaashaandhiga, Taliyaal ciidan iyo xubno ka tirsan dowladda ayaa safarka ku weheliya madaxweynaha Soomaaliya, kaas oo maanta ka bilowday gobolka shabeelaha Hoose.
Madaxweyne Xasan sheikh Maxamuud safarkiisa Marka waxaa uu qeyb ka noqonayaa safari uu madaxweynuhu ku tegey dalka Soomaaliya meelo ka mid ah, sida Baydhabo, Beledweyne iyo Garoowe oo uu horey u booqday tan iyo markii la doortay 2012.
Saldhiga booliska ee Garoowe oo maanta xarigga laga jaray mashruuca lagu ballaarinayo (Dhegeyso)
Soomaaliya oo codsatay in DF lagu soo wareejiyo Burcad-badeed ku jira xabsiyada Kenya